Notafihan’ny Fadintseranana Hongkong ny vondrom-barotra pro-demaokrasia iray, teraka ny fanehoam-pitiavana · Global Voices teny Malagasy
Tranombarotra "vony" pro-demaokrasia malaza i AbouThai
Voadika ny 12 Avrily 2021 6:17 GMT
Filaharana eo ivelan'i AbouThai taorian'ny fanafihan'ny Fadintseranana. Saripika avy amin'ny Stand News. Nahazoana alalana.
Nandefa mpiasam-panjakana manodidina ny 100 ny Fadintseranana Hong Kong hanafika sy handraoka entambarotra avy amin'ny mpivarotra atsinjarany, AbouThai, tamin'ny 8 Avrily, manonona ny fanitsakitsahana ny didy hitsivolana fiantohana ny fiarovana ny mpanjifa amin'ny entambarotra amin'ny fisian'ny marika tsy [hay vakiana] amin'ny karazan'entana miisa 14.
AbouThai dia Mike Lam no tompony, mpandraharaha pro-demaokrasia nanomboka ny varotra atsinjarany tamin'ny taona 2015. Noroahan'ny fadintseranana Hong Kong izy rehefa nipoitra tamin'ny fahitalavitra ho fanoherany ireo mpanelanelana avy amin'i Shina tanibe izay manararaotra amin'ny visas ahafaha-miverimberina hanafarana entana avy ao Hong Kong tsy mandoa fadintseranana. 26 taona izy fony very asa ary vao tonga tao Hong Kong niaraka tamin'ny zananivavy vao telo volana ny vadiny Thailandey.
Ho famelomana ny fianakaviana dia nindrana HK$100.000 (tokotokony ho US$14.000 izany) avy amin'ny banky iray izy ary nanokatra varotra manana habe 5,5 metatra toradroa tao amin'ny distrika fonenan'olona iray, mivarotra legioma Thai. Amin'izao fotoana izao ilay varotra atsinjarany manana tranombarotra miisa 26 manerana an'i Hong Kong.
Nandray anjara tamin'ny fifidianana savaranonandon'ny pro-demaokrasia tamin'ny volana Jolay 2020 i Lam ary iray amin'ireo mpikatroka miisa 47 nampangaina ho “nioko hanakorontana ny fahefam-panjakana” araka ny Lalànan'ny Fiarovam-Pirenena.
Nakorontan'ny mpiasam-panjakana ao amin'ny fadintseranana ny fitehirizan'entan'ny AbouThai sy ireo tranombarotra 26 nananany, nandraoka entambarotra mitentina iray tapitrisa dollar Hong Kong mahery noho ny tsy fisian'ny marika shinoa amin'ny karazan'entana miisa 14 karazana ao aminy. Mpitantana iray 33 taona no nosamborina nandritra ny bemidina.
Niala tsiny ilay vondron-tranombarotra tao amin'ny fanambarana navoakany tao amin'ny pejy Facebook noho ny fanadinoana ary navoitrany fa amin'ny fomba mahazatra, tokony ho namoaka fampitandremana na namoaka taratasim-pitsarana fotsiny ny Fadintseranana. Nivoaka tamin'ny mahazatra tsotra izao ny bemidina nataon'ny tanàna, hoy ny navoakan'ny fanambaràna:
[…]izay fombam-pitsarana faratampony izao angamba dia noho ny anondroana an'i AbouThai amin'ny karazana loko. Fa iza no tsy manana loko eto Hong Kong? Metropolitana manana kolontsaina tatsinanana sy tandrefana i Hong Kong ary maneho ny kolontsaina isankarazany ireo loko ireo ary izany no mahatonga an'i Hong Kong hanintona ny mpampiasa vola manerana izao tontolo izao. Manoloana ny famoretana, hiavo-tena amim-panetretena i AbouThai. Ny hany tadiavinay dia ny hanohy amin'ny fikarakarana ny Hongkongers […]
Malaza ho tranombarotra “vony” amin'ilay antsoina hoe “faribolan-toekarena vony” – fisantaran'andraikitra [mg] iray ifanohanana sy ifanehoan'ny olompirenena pro-demaokrasia firaisankina – i AbouThai. Maro ireo tranombarotra vony naneho fanohanana tamin'ny alalan'ny fanomezana fihenambidy amin'ireo mpanjifa nividy zavatra tao amin'ny AbouThai tao anatin'ny andro vitsivitsy.
Tao amin'ny fanambaràna an-gazety nivoaka tamin'ny 9 avrily, notsipahan'ny fadintseranana tsy ho “famoretana” ny hetsika nataony, nilazany fa ny bemidina nanerana ny tanàna dia notontosaina rehefa naharay fitarainana sy nitsapa ireo vokatra sasantsasany ny mpiasam-panjakana.
Tamin'ny herintaona ihany koa ny Fadintseranana Hong Kong nanenjika ireo varotra maska “tsy made in China” tamin'ny filazana fa nisy fanitsakitsahana famariparitana ny varotra. Mpikambana isan'ny fon'ilay antoko fanoherana efa levona amin'izao fotoana izao, Demosisto, no nosamborina nandritra ny fanafihana.
Fariparitan'ilay mpanoratra an-gazety mahaleotena iray, Kris Cheng, ho “seho media” ity bemidina manerana ny tanàna ity:
Ity raharaha ity izany dia momba ny vokatra ampitan-dranomasina amidin'i AbouThai ao Hong Kong tsy misy filazana amin'ny teny shinoa, na dia fantatry ny rehetra aza ny vokatra vidian-dry zareo. Tena fanohintohinana tokoa, tsy maintsy mandraoka iray tapitrisa dolara HK ary dia mahazo ny seho media iray manontolo, sa ahoana?
Goavana tokoa ny fatiantoky ny vondron-tranombarotra ary nitranga iray andro monja mialoha ny “fetibe Songkran” fanaon'ny tranombarotra isa-taona.
Am-panatontosana ny varotra “fetibe Songkran” tontosaina mandritra ny herinandro manomboka rahampitso ny AbouThai, satria manomboka amin'ny herinandro ny fetibe Thai. Saingy amin'izao fotoana izao noraofina ny entan-dry zareo. Hevero ange hoe misy olona avy ao amin'ny Fadintseranana tena mpiondana tokoa, ka nahay nanararaotra indrindra ny fotoana.
Ho valin'ny fanafihana, nirohotra hividy zavatra tao amin'ny tranombarotra ireo Hongkongers pro-demaokrasia. Raisin'i Alex Lam, mpanangom-baovao avy ao amin'ny Apple Daily News ho hetsika fandrotsaham-bato izao:
Satria moa efa tsy hita intsony ilay fifidianana (nanana ny dikany), dia mitady fifidianana araka ny fombany ny HKers.